Ubuciko obuyimfihlo bokumaketha kwedijithali | Martech Zone
Ubuciko obuyimfihlo bokumaketha kwedijithali
NgoLwesibili, Septhemba 10, 2013 NgoLwesithathu, Septemba 11, 2013 Douglas Karr
Le infographic evela ku-Hostgator igxuma phakathi kokukhangisa nokwenyusa, amathuluzi nemicimbi yangempela yokukhangisa yedijithali. I-SEO isu, kepha ama-Analytics akulona isu - ithuluzi lokusiza ukuthola isu. Ukumaketha okukhokhelwe kuyingxenye yecebo eliphelele kepha hhayi isu ngokwalo. Futhi ukuguqulwa akulona isu, kungumphumela wecebo. Kuyaxaka ukuthi bakubeka kanjani ndawonye, ​​kepha kukhona amanye amathuluzi, ama-tidbits, nezibalo ezinikeza inani.
I-Hostgator: Ukumaketha kahle okuthile endaweni yedijithali kungabonakala kunzima futhi kuyindida. Kunezindlela eziningi okufanele zilandelwe ngasikhathi sinye futhi zikalwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi wenza umsebenzi omuhle, futhi uthola i-bang yakho kakhulu.
Angikholwa ukuthi ukumaketha endaweni yedijithali kuyindida futhi akuqondakali. Akukaze nanini ngaphambili sibe nohlobo lwamathuluzi esinalo lokwenza izinqumo ezihlakaniphile. Futhi ngaphandle kokuthi kushiwo ukumaketha kwamaselula, amasu wevidiyo, nokumaketha nge-imeyili - ngicabanga ukuthi le infographic ilahlekelwe uphawu.
Tags: Ama-AnalyticsUkukhangisa OkuqukethweUkuguqulwai-hostgatorseo
Ividiyo: Ukuqhathaniswa komphakathi ne-Search Smackdown
Kungani Usebenzisa Okubukwayo Kwezokuxhumana?